DAAWO: 40-jir doonayay inuu Nolosha ku Aaso Hooyadiisa oo gacanta lagu dhigay - Hablaha Media Network
HMN:- Dadaalka uu doonayay ninkaan 40-sano jirka ah inuu ku aaso Hooyadii ayaa waxaa fashiliyay dad wadada marayay oo maqlay oohinta hooyada la doonayay in nolosha lagu aaso.
Ciidamada Booliska Deegaanka Kaabu-jaay degmada Bangoowe ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay nin isku dayay inuu nolosha ku aaso hooyadii ka dib markii uu soo kala dhex galay muran dhanka dhulka ah.
Hooyada ayaa ku qeylineysay in la caawiyo,waxaana durbadiiba goobta ku yaacay dadkii wadada marayay oo ka helay ninkaan oo doonayay inuu hooyadii ku aaso Musqul/Suuli la qoday.
Betris-nasaka ayaa waxay ka sheekeysay sida wiilkeeda uu doonayay inuu ugu qasbo iney qeyb ahaan ka siiso dhul ay lahayd oo ay iibsatay waqti hore.
Haweeneydaan oo aan la qabin ayaa sheegtay iney dooneyso in hantideeda ay ku badbaadiso nolosheeda,waxaana Wiilkeeda oo maqlay qorshaheeda uu ka codsaday iney siiso qeyb ka mid ah dhulkeeda balse markii uu ku fashilmay uu isku dayay inuu nolosha ku aaso Hooyadiisa.
Dhacdadaan ayaa si aad ah looga hadal hayaa deegaanka ay ka dhacday,waxaana hadda Booliska ay deegaanka ay gacanta ku hayaan ninka falkaasi geysan rabay.